पृथ्वी नजिक रहेको ब्ल्याक होल चम्किलो बन्दै, कुनै खतरा छ ?
एजेन्सी, ७ असोज । पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक रहेको ब्ल्याक होल थप चम्किलो बन्दै गएको छ ।
वैज्ञानिकले सैजिटेरस ए स्टार नामक ब्ल्याक होलको चमक बढ्दै गएको बताएका छन् । यो वर्ष उक्त ब्ल्याक होलको चमक २ गुणा बढ्दै गएपछि आकार समेत बढेको छ ।
गत अप्रिल १० मा सैजिटेरस ए स्टारको तस्बिर सार्वजनिक गरिएको थियो । यो ब्ल्याक होल पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक रहेका २ वटा ब्ल्याक होलमध्ये ( वैज्ञानिकले यसमध्ये अर्को ब्ल्याक होलको नाम एम-८७ राखेका छन्) एक हो । यो पृथ्वीदेखि २६ हजार प्रकाश वर्ष टाढा रहेको छ ।
सैजिटेरस ए स्टारको खोज २४ साल पहिला नै भएको थियो । यो आकाशगंगा मिल्की वेको केन्द्रमा छ । यसलाई एउटा शान्त ब्ल्याक होल मानिन्छ । तर शान्त मानिएको यो ब्ल्याक होलको वरपर हाल असामान्य हलचल देखिएको वैज्ञानिकको भनाइ छ ।
यसबाट पृथ्वीलाई कुनै खतरा छ त ?
ब्ल्याक होल चमक बढेपछि पृथ्वीमा यसको असर कस्तो पर्ला भन्ने चिन्ता बढेको छ । तर उक्त चमकबाट पृथ्वा वा आकाशगंगाका कुनै पनि ग्रह प्रभावित नहुने वैज्ञानिकले प्रस्ट पारेका छन् ।
त्यस्तै वैज्ञानिकले सैजिटेरस ए स्टारको चमक बढ्नुको कारण समेत बताएका छन् । एस्ट्रोफिजिकल जनरल लेटर्समा प्रकाशित एक लेखका अनुसार यो ब्ल्याक होल पहिलाको तुलनामा बढी शक्तिशाली बनेको र आफ्नो वरपरका चीजलाई आफूमा समाहित गरेको बताइएको छ । यो प्रकृयालाई वैज्ञानिकले ‘बिग फिस्ट’ वा बडा भोजन भनेर नामाकरण गरेका छन् ।
ब्ल्याक होलको आफ्नै प्रकाश नहुने तर यसको वरपर आउने वस्तुमा भने प्रकाश हुने भएकाले चमक बढेको वैज्ञानिकको तर्क छ । अघिल्लो वर्ष यो ब्ल्याक होल नजिकैबाट गएको १ ताराको ग्यास ब्ल्याक होलमा पुगेकाले समेत चकम बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै यो ब्ल्याक होलको आकार बढ्दै गएकाले समेत चमक बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । हाल वैज्ञानिकले चकम बढ्नुको कारणलाई विस्तृत रुपमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।